Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
BOKY misy ﬁtantarana marina ity. Nalaina avy ao amin’ny Baiboly, ilay boky malaza indrindra eo amin’izao tontolo izao izany. Omeny anareo ny tantaran’izao tontolo izao hatramin’ny fotoana nanombohan’Andriamanitra namorona ka hatramin’izao androntsika izao. Miresaka ny amin’izay ampanantenain’Andriamanitra hatao amin’ny hoavy koa aza izy ireo.
Ity boky ity dia manome anareo hevitra ny amin’izay atao hoe Baiboly, ary miresaka olona ao amin’ny Baiboly sy ny zavatra nataon’ireo. Mampiseho koa izy ny fanantenana lehibe, dia ny ﬁainana mandrakizay ao amin’ny paradisa an-tany nomen’Andriamanitra ny olona.
Misy ﬁtantarana 116 ao amin’ny boky. Natambatra ho ﬁzarana valo ireny. Ny pejy iray eo amin’ny fanombohan’ny ﬁzarana tsirairay avy dia miresaka fohy izay ho hita ao amin’ilay ﬁzarana. Milahatra araka ny ﬁsehoan-javatra eo amin’ny tantara ireo ﬁtantarana. Manampy anareo izany hahafantatra ny fotoana nitrangan-javatra teo amin’ny tantara, rehefa ampifandraisina amin’ny ﬁsehoan-javatra hafa.
Amin’ny ﬁteny tsotra no anaovana ireo ﬁtantarana. Maro aminareo ankizy tanora no ho afaka hamaky azy ireny samirery. Ho tsikaritrareo ray aman-dreny fa ireo zanakareo kelikely kokoa dia ho faly raha vakina aminy miverimberina foana ireny ﬁtantarana ireny. Ho hitanareo fa mirakitra zava-mahaliana betsaka ho an’ny tanora sy ny antitra ihany koa ity boky ity.
Ny ﬁlazana toko sy andininy ao amin’ny Baiboly dia omena isaky ny mifarana ny ﬁtantarana tsirairay avy. Ampirisihina ianareo hamaky ireny tapany ao amin’ny Baiboly ireny, izay iorenan’ireo ﬁtantarana.
Notsorina ireo andininy avy ao amin’ny Baiboly. Tsy ho sarotra amin’ny ankizy àry ny hahazo ny heviny. Tondroina eo amin’ny faran’ny ﬁtantarana tsirairay ny loharanon’ireo andininy.